Amiiradda Japan oo ay is guursanayaan wiil aan boqortooyada ka tirsaneyn - BBC Somali
Amiiradda Japan oo ay is guursanayaan wiil aan boqortooyada ka tirsaneyn
Image caption Lammaanaha oo isku dhoolla-caddeynaya kaddib markey alkumashadooda ku dhawaaqeen
Amiiradda Japan Mako ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay is alkunteen wiil aan qoyska ka tirsaneyn kaddib markii boqortooyada ay ansixisay.
Arrintan ayaa ka dhigan in amiiraddu aysan ka sii tirsanaan doonin boqortooyada oo aysan dhaxalsuge noqon doonin.
Sharci Japan ka jira oo aan la isku waafaqsaneyn ayaa dhigaya in haweenka ka tirsan boqortooyada ay lumen doonaan booskooda haddii ay guursadaan qof aan boqortooyada ka tirsaneyn, halka laakiin xaalka raggu uu sidaa ka duwan yahay.
Shir jaraa`id oo ay shalay qabatay ayay amiiraddu ku sheegtay in markii ugu horreysay uu sida qorraxdii u soo jiitay dhoolla-caddeynta Kei Komuro.
"Waan ogaa tan iyo markii aan carruur ahaa in markaan guursado aan ka tegi doono boqortooyada," ayay tiri Mako.
Mako iyo gacaliyaheeda Kei Komuro, waa 25-jir. Kei wuxuu u shaqeeyaa hay`ad arrimaha sharciga ka shaqeysa. Lammaanahan ayaa kulmay shan sano kahor iyagoo isku jaamacad dhiganayay.
Amiiradda ayaa laga sugayay inay arrintan ku dhawaaqdo bishii July, balse dib ayaa loo dhigay kaddib markii musiibadii roobka ay saameysay galbeedka Japan. Arooska ayaa la filayaa inuu qabsoomo sanadka soo socda, sida laga soo xigtay warbaahinta qaranka dalkaas.